Mandeha araka ny fahamarinana
«Fa faly indrindra aho, fony nisy rahalahy tonga ka nanambara ny fahamarinanao, dia toy ny andehananao araka ny fahamarinana. » - 3 Jao. 3.
Tena ilaina ny manana eritreritra tsara sy madio, ary asa mafy mba hahafahana mandresy ny drafitra tsara lahatr'i Satana. Ankehitriny àry Andriamanitra dia manao antso mba hiezahan'ny rehetra araka izay azony atao hahatrarana fenitra ambonimbony kokoa, mba hahatonga ny tsirairay hilofo, ho masina kokoa ka handà ny tenany ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Mila beazina amin'ny fomba manara-penitra kokoa ny tanorantsika mba hahafantarany fa izy tenany no iankinan'ny hoaviny. Tsy misy afaka manome antoka ny famonjena ny hafa afa-tsy ny fananana ny fahamarinana ao am-po toy ny ao amin'i Jesôsy. Mila volena ao am-po amin'ny alalan'ny Fanahy Masina izany. Maro anie ireo izay heverina ho fivavahana amin'izao vanim-potoana misy antsika izao no tsy hisy intsony rehefa iharan'ny famelezan'ny tàfik'i Satana. Ny fahamarinana irery sisa no hahajoro, dia ny fahendrena avy any ambony izay hanamasina ny fanahy.
Aoka tsy hisy hihevitra fa zavatra natao ho laharam-pahamehana ny fanaranam-po. Aoka tsy hisy hanome rariny ny fitiavan-tena. Aoka ny tanora hianatra hifehy ny filany ka hitandrina aoka izany amin'ny fampiasany izay ananany. Aoka ny rehetra hijery an'i Jesôsy, hibanjina ny toetrany ary hanaraka ny diany. — YI, 24 May 1894.
Raha raisina ny fahamarinana dia afaka hitondra fandrosoana vaovao sy maharitra. Arakaraka ny hibanjinana azy no hitomboan'ny hazavany ary arakaraka ny handalinana azy no vao mainka hahatonga azy ho lehibe sy lalina kokoa. Noho izany dia hanandratra antsika any amin'ny fahalavorariana izy .ary hahatonga ny finoantsika sy ny fitokiantsika an'Andriamanitra ho hery eo amin'ny fanatontosana ny asa miandry antsika. — Ms 153, 1898.
Ny endrik'Andriamanitra lavorary dia hiseho amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny fahamarinany masina. — TFC, 6:167.